5 qaab oo loo sameeyo baraf macmal ah oo macmal ah - Ikkaro
Inicio >> Imtixaanka guriga >> Sida loo sameeyo baraf macmal ah
Kuwani waa maaddooyinka aan u isticmaali doonno dhammaan cuntooyinka.
Xumbo xiirista (€ 0,9)
Galeyda (€ 2,2)
Qaboojiyaha (kaas oo aan ku leenahay guriga, waa la isticmaalaa wax aad u yar)
Xafaayad iyo / ama sodium polyacrylate
Waxaan ka tagayaa fiidiyoow aan sameeyay anigoo samaynaya noocyada kala duwan ee barafka si hawsha si muuqata loogu arko. Qaabka xafaayada ee aan keydiyay markii ugu dambeysay. Waxaan hayaa dhowr fiidiyow oo dheeri ah oo diyaar ah oo aan si madax-bannaan ugu dhajin doono qoraalada. Marka waan kaa tagayaa xiriiriyehan si aad ugu qorto kanaalka Youtube
Aynu dhibaato galno.
Qaabka 1 - Xayeysiiska
Aragtida waa mid aad u fudud, waxaan ku aragnay oo ka aqrinay boqolaal ama kumanaan boggaga internetka. Waxaan qaadanaa dhowr xafaayad, waanu fureynaa waxaanna kala soo baxnaa suufka xiran yahay si uu dhuuqa diirku u qabsado. Tan waxaa lagu qasi karaa sodium polyacrylate.
Polyacrylate waa polymer cabi kara ilaa 500 jeer mugiisa markay biyaha qabatana waxay aad ugu egtahay barafka.
Laakiin tan mabda 'ahaan way fududahay ficil ahaan waxaan helay dhibaatooyin qaar, oo aanan u arkin qof wax ka faallooda. Malaha aniga ayaa nasiib darada ahaa.
Polyacrylate-ka ayaa lagu qasan yahay cudbiga suufka iyo kala-saarista ayaa runtii culeys badan yeelatay. Waxaan isku dayay laba xafaayad, mid dadka waawayn inay awoodaan inay badsadaan midna caruurta, wax lamid ahna way igudhaceen labadoodaba, intaan xoqo suufka suufka, kudhawaad ​​polymer ma dhaco laakiin daruur cufan ayaa hareeraha waxaad dul sabeyneysaa hawada, kana sameysan tahay suufka loo yaqaan suufka waxaanan filayaa polymer. Runtuna ma jecli inaan liqo, wax yar baa ka fikiraya in gabdhahaygu sidaas u neefsadaan.
Marka waan iska tuuray qaabkan illaa aan kahelayo hab hufan oo nabdoon oo meesha looga saaro polyacrylate. Dhanka kale, haddii aad rabto inaad tijaabiso cuntadan, waxay ku iibiyaan meelo badan.
Sidoo kale waxaan ka iibsan karnaa sodium polyacrylate sida oo kale.
Hababka aan u arko inay ku habboon yihiin carruurta oo maxaan dhigi lahaa sida tijaabooyin loogu talagalay carruurta waa sida soo socota:
Habka 2 - Maskaxda iyo xumbo
Aynu ku bilowno Cunnooyinka loo yaqaan 'Cornstarch' iyo xiirashada habka xumbada.
Maizena waa bur wanaagsan oo galley ah, waan iibsaday calaamadahan laakiin waad iibsan kartaa wax kasta oo kale, farqiga u leh daqiiqda caadiga ah waa mid aad ugafiican, aadna looga sii shaandheeyaa.
Ma siinayno saamiga saxda ah ee isku dar ah. Halkan waxaan si fudud ugu dareynaa galley iyo xumbo oo isku dar ilaa aan ka gaarno cufka la doonayo barafka.
Barafka ka samaysan budada galleyda iyo xumbada ayaa leh taabasho aad u jilicsan oo carruurtu jecel yihiin in badan. Way yara cadan tahay markaa ma siinayso barafkaas dhabta ah, sida ku dhacda isku dar ah bicarbonate.
Waxyaabaha kale ee xisaabta lagu darayaa waa qiimaha burkan, oo ka badan € 2 haddii aan rabno inaan qaddar sameyno, aad ayey uga qaalisan tahay bicarbonate. Sidoo kale wasakh Ma ahan wax la buunbuuniyey, oo si fudud ayey ku socotaa, laakiin meel kasta oo aad taabato ayay ku wasakhoobaan.
Qaabka 3 - oo leh soodhaha iyo xumbada xiirashada
Cuntadan soo socota ayaa leh soodhaha iyo xumbada xiirashada. Sidaad u aragto, xumbada xiirashada ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa tijaabooyinka guriga, laga bilaabo noocyada barafka ilaa noocyada kala duwan ee jilicsan.
Markii aad iibsaneysid bicarbonate of soda, waxaan kugula talinayaa inaad qaadato kiishkan kiloolada ah, oo aad u jaban, waxay igu kiciyeen 80 ama 90 senti. Haddii aan qaadano daasadaha balaastigga ah tiro aad u yar ayaa jirta waana ka qaalisan tahay.
Habka wuxuu la mid yahay kan loo yaqaan 'Cornstarch', waxaan ku darnaa bicarbonate, xumbo waanu isku darnaa oo ku dhameystirnaa wixii aan u baahanahay. Haddii ay aad u buurnaan badan tahay waxaan dhignaa bicarbonate ka badan haddii ay aad u jilicsan tahay oo marka la istimaalayo aysan waxba qaab ahaan u haysanaynin maxaa yeelay waxaan dhigeynaa xumbo badan. Iyo wixii la mid ah illaa aan ka helno cufka la doonayo.
Si ka duwan barafkii hore, midkani midabkiisu waa caddaan saafi ah, muuqaal ahaan wuxuu u eg yahay baraf dhab ah.
Qaabka 4 - soodhaha iyo biyaha
Oo waxaan u tagnaa midka waxay noqotay habka aan ugu jeclahay, in la sameeyo baraf macmal ah iyadoo la isticmaalayo kaliya soodhaha iyo biyaha.
Waana taas, in kastoo ay umuuqato been, barafka lagu tuuray qaabkan wuxuu aad ugu eg yahay kan xumbada iyo kan qaboojiyaha aan arki doono dhamaadka. Si aad u badan oo aanan calaamadeynin taarikada barafka lagu keydiyey; gabdhahaygu way ciyaarayeen ka dibna waan garan waayey midkaas. Kaliya waxaan ku aqoonsan karaa midka leh Maizena si dhakhso leh midab ahaan.
Waxaan aad u xiiseynayay in la ii aqoonsado maxaa yeelay waxaan doonayay inaan arko sida mid waliba u soo ifbaxay maalmihii la soo dhaafay aakhirkiina wax kale oo aan ka doorto ma ahee inaan isku dayo, maxaa yeelay si kasta oo aan u taabto, ma kala saari karin. Taabashadu way inyar ka duwan tahay mid kasta, laakiin ma jiro wax kaa dhigaya inaad tiraahdo kan ayaa aad u jilicsan oo waa xumbo, tusaale ahaan.
Anigana waxaan uga faa'iideystaa tan si aan u xasuusto inaan u adkaystay tijaabooyinka mustaqbalka oo aan wax qoro, si fiican loo aqoonsado oo wax kasta lagu qoro buug xusuus qor ah si aanan lumin xogta waqti ka dib ama kormeer kasta inta lagu jiro tijaabada.
Cunto qaadashada barafka waxay la mid tahay dhammaantood, bicarbonate-ka biyaha iyo qas. Uma baahnid inaad biyo badan daadisid.
Markii hore waxaan idhi waa kan aan ugu jeclahay maxaa yeelay Haddii aan helno natiijooyin aad u la mid ah, waxaan u maleynayaa in waxa ugu fiican ay tahay in la sameeyo waxa ugu fudud. Waa run in carruurtu ku raaxaystaan ​​tan ka yar, maxaa yeelay waxay jecel yihiin inay gacmahooda wasakh ku noqdaan, laakiin kani waa kan ugu jaban dhammaan.
Habka 5 - qaboojiyaha iyo soodhaha
Cunnadii ugu dambeysay kahor iyo sharax qaabka xafaayada caanka ah.
Xaaladdan oo kale waxaan isku dari doonnaa qaboojiyaha iyo soodhaha. Waa, waxaan u malaynayaa, habka ugu adag, maxaa yeelay inkasta oo xumbadu wax badan dhegto, taabashadu way wanaagsan tahay oo isla markiiba waa la isku qasan yahay oo gacanta ayay ka baxaysaa. Laakiin qaboojiyuhu wuxuu gacmahaaga ka dhigayaa kuwo jilicsan oo jilicsan, ma aanan jeclayn wax badan, sinalku si wanaagsan ayuu isugu qasmaa oo gacmahaagaa uga soocaa, laakiin iyagu waa kuwo saabuun leh.
Waa inaad qadar yar dhigtaa, inbadan ayaan dhigay oo si aad uhesho qaab wanaagsan waxay ahayd inaan dhigo qaboojiye badan.
Barafku wuxuu umuuqdaa mid ka culus kuwii hore, laakiin waa bilowga oo kaliya, markay saacado kooban dhaafaan dhammaantood waxay noqdeen kuwo aan lakala garan karin.
Isbarbardhiga noocyada barafka macmalka ah
Halkan waxaan ku dhaafnay xafaayada ama sodium polyacrylate maxaa yeelay waan heli kari waayey. Weli ma aanan isbarbar dhigin polyacrylate oo waxaan dhigay isbarbardhiga.
Sawirada galabta waxaa kujira 4 baraf oo la helay. 3-da bicarbonate ee ahmiyada koowaad ah lama kala saari karo, laakiin fiiri midka loogu talagalay Maizena. Ma aragtaa sida ay jaallaha u tahay?
Niyad jabka barafka wuxuu yimaadaa 24 saac kadib, isku darkii waa qalalay wixii aan ka tagnayna waxay la mid yihiin haddaynu haysanno galley ama bicarbonate dabacsan waana inaan dib u cusbooneysiinno isku darista ama u waraabinnaa si ay mar kale u qaadato joogtaynta barafka. Taasi waa sababta habka biyaha uu u yahay midka aan aadka u jeclahay.
Marka la eego, sodium polyacrylate ayaa ila muuqata aniga aniga, maxaa yeelay waxaan fahamsanahay inay sii dheeraaneyso. Isla marka aan isku dayo, waan kuu sheegi doonaa ;-)
Categories Imtixaanka guriga, Tijaabooyinka carruurta Tigidhka tigidhka
2 faallooyin ku saabsan «Sida loo sameeyo baraf macmal ah»
Diisambar 21, 2018 markay ahayd 9:39 pm
Mahadsanid. Waxay ahayd maqaal aad u xiiso badan.
Diseembar 22, 2018 at 11:42 am
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaad jeceshahay :)
Dhawaan midka leh jilibka ;-)
1 Qaabka 1 - Xayeysiiska
2 Habka 2 - Maskaxda iyo xumbo
3 Qaabka 3 - oo leh soodhaha iyo xumbada xiirashada
4 Qaabka 4 - soodhaha iyo biyaha
5 Habka 5 - qaboojiyaha iyo soodhaha
6 Isbarbardhiga noocyada barafka macmalka ah